Uyini umehluko phakathi kwe-Resalyut Pro ne-Essential Forte? Analogs nokubuyekezwa > Ukwelashwa nokuvimbela
Resalut noma Okubalulekile: yini engcono futhi yini umehluko
Inhlala-kahle, isimo esivamile nokuheha komuntu kwangaphandle kuncike esimweni sokusebenza kwesibindi. Umsebenzi osebenza kahle walesi sitho uqinisekisa ukwakheka kwesakhiwo nombala wesikhumba, izinwele nokulungiswa kwesisindo somzimba womuntu esijwayelekile.
Ukuhlinzeka ngemibandela edingekayo yokusebenza kanye nokusiza isibindi ukuthi sibhekane nethonya lezinto ezingezinhle zemvelo, izidakamizwa eziseqenjini le-hepatoprotectors can. Le yimithi iRezalyut neBalulekile. Ngaphambi kokuthi uqale ukwenza isimo sokuqhathanisa salezi zidakamizwa ezimbili, kufanele uqonde izimfanelo zabo ngazinye.
Okubalulekile kuqukethe isakhi esisodwa kuphela esisebenzayo - isitshalo phospholipids. Zisuselwa ku-diglycerin esters kanye ne-cholinophosphoric acid. Ngaphezu kwento esebenzayo, iqukethe amavithamini alandelayo:
Onke la mavithamini we-B afakwa ekwakhekeni komuthi ngoba abamba iqhaza ezingxenyeni zezinqubo zokuvuselelwa kwesibindi, okuvame ukulinyazwa yizifo ezahlukahlukene.
Ukwakheka kwe-Resalyut yezidakamizwa
Ukwakheka okusemthethweni kukhombisa into eyodwa kuphela esebenzayo - phospholipids soya. Ekuqaleni, ungacabanga ukuthi ukwakhiwa kwesidakamizwa iRezalut kunezakhi ezifanayo njengakudingekile. Kepha lokhu akulona neze iqiniso. Ukwakheka kwalesi sidakamizwa kuqukethe amanye ama-hepatoprotectors anamandla amabili - i-phosphatidylcholine ne-phosphoglycerides. Lezi zingxenye zigxile ngokuqinile ku-lumen wesibeletho somuntu. Kepha ubude bomphumela wabo uphansi kancane kunezinto ezakha i-Essentiale.
Izinkomba zokusetshenziswa kwe-Resaly yezidakamizwa yile elandelayo:
Izinkomba zokusetshenziswa kwe-Essentiale yezidakamizwa:
Ukuxhumana kokusetshenziswa kwe-Resalyut yezidakamizwa:
Isikhathi sokukhulelwa nokuncelisa ibele.
Izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-12.
Ukuvinjezelwa noma ukutholwa kokungabekezeleleki kwezakhi zomuthi.
Contraindication nokusetshenziswa kwesidakamizwa Essentiale:
Umuntu ngamunye, umuthi unqunyelwe abesifazane abancelisa ibele.
Kumaphilisi, umuthi uvinjelwe izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala, kanye nemijovo - kuze kube yiminyaka emithathu.
Ngokungakwazi ukubekezelela izinto ezithile eziyingxenye yomuthi.
Uma uthatha i-Resalut ngokungalungile, imiphumela enjalo emibi ingavela:
Uma kungalungile ukuthatha i-Essentiale , khona-ke ungabona ukuphambuka okunjalo emzimbeni womuntu:
Ukuvuvukala kwesikhumba endaweni lapho kufakwe khona umjovo noma i-dropper.
Isikhumba esikhanyayo noma okhalweni.
Ukungezwani komzimba (ezimweni ezingavamile).
Isiyezi, ukudideka kwendawo, ukugabha, ubuthakathaka, isicanucanu.
Ukuqhakaza kanye nokungakhululeki.
Izinzuzo zayo zifaka lezi zimfanelo ezilandelayo:
Ingozi yemiphumela emibi, uma iqhathaniswa nezinye izidakamizwa ezifanayo, iphansi impela.
I-bioavailability ephezulu yomzimba womuntu.
Uma kuqhathaniswa nezidakamizwa ezifanayo, inani eliphakeme.
Izinga lokuphuma kwesidakamizwa emzimbeni womuntu lincane.
Isikhathi sokuxakeka okuphezulu ku-plasma yegazi lento esebenzayo ihlala isikhathi eside kunaleyo yemithi efanayo.
Lo muthi unezinhlobonhlobo eziningana, nokuthi yimuphi umuntu okufanele awunikeze umuntu ngamunye, udokotela unquma ngokususelwa ekuhlolweni kwesiguli. Izinzuzo Zokubalulekile:
Isikhathi esifushane sokugcotshwa okukhulu kwento esebenzayo ku-plasma yegazi, isikhathi sokwenza isikhathi eside.
Ngomzimba womuntu, i-bioavailability ephezulu yezakhi ezisebenzayo.
Ububi balesi sidakamizwa munye - izindleko eziphakeme.
Izici zokuqhathanisa zale mishanguzo zibhekisisa inani lentengo (amaphilisi angama-50 asikiwe abiza ama-ruble angama-750, kanye ne-Essential - ruble engu-750-900). Ukusuka kulokhu kungabonakala ukuthi intengo ye-Essential ibiza kakhulu kune-Resalut. Kepha kufanelekile ukubheka iqiniso lokuthi Okubalulekile kutholakala ezinhlotsheni eziningana. Kukhona izinketho ezishibhile kancane. Okuningi kuncike ekuqoqweni kwezakhi zezidakamizwa ezikhona emithini, kanye nenani kanye nenani lamaphilisi kanye nama-ampoules kwiphakeji elilodwa.
Kepha umehluko muni phakathi kwale mishanguzo:
Umehluko omkhulu usezinkampanini zomenzi kanye nentengo.
Izifundo nezindlela zokwelashwa zingahluka. Ngemuva kwakho konke, afakwa umuntu ngamunye kumuntu ngamunye.
Contraindication kanye izinkomba zokusetshenziswa zihlukile.
Okubalulekile kuyatholakala kuma-ampoule omjovo kanye namaphilisi omlomo, kanye neRezalyut - kumaphilisi athambile.
Ukwakheka kwemithi kwehlukile, kepha futhi kunezakhi ezifanayo.
Umphumela uqukethe amanoni e-omega-3 polyunsaturated fatty acids. Banomthelela ekujwayekeni kohlelo lwezinzwa nomsebenzi wobuchopho. Ngenxa yalesi sizathu, ngokuwohloka kwesibindi kwe-neurodermal, i-Resalut kufanele isetshenziswe.
Analogues of Resalut umuthi yile mithi elandelayo: Phosphoncial, Elsential Forte, Essliver, Livolife, Lipoid.
Imithi efanayo yemithi ebaluleke kakhulu ye-Forte yile: Ovesol, Antliv, Esslial, Phosphoncial, Rezalyut, Livolife Forte.
Abaningi banesithakazelo embuzweni wokuthi iliphi hepatoprotector elizokhetha i-Phosphogliv noma i-Essentiale noma i-Rezalyut Pro engcono kakhulu, futhi izinkomba nokuphikiswa okusetshenziswayo kuyathakazelisa kubathengi. Ikakhulu abafundi be- “Edumile mayelana Nezempilo” ngizocubungula izici zalawa makemithi.
Zonke lezi zidakamizwa ezintathu zifakiwe eqenjini lezidakamizwa ze-hepatoprotective. Inhloso yale mithi yokwelapha ukukhuthaza amakhono okuphinda enze kabusha kwesibindi somuntu.
Kuwo wonke umuthi, into esebenzayo imelwe ngama-phospholipids - izinto ezisebenzayo ngokwemvelo zesimo se-lipid ezihlukaniswe uwoyela wesoya. Kulesi sidakamizwa i-Phosphogliv kungenye into yezidakamizwa - glycyrrhizic acid.
I-Essentiale iqukethe ama-300 mg wama-phospholipids. I-Phosphogliv iqukethe ama-65 mg we-phospholipids, kanye nama-35 mg we-glycyrrhizic acid. Ukulungiswa kwemithi i-Resalut Pro iqukethe ama-600 mg wesithako esisebenzayo. Yonke imithi ithengiswa emakhemisi lapho sekwethulwa umuthi. Yonke imithi iyatholakala emaphaketheni.
Ama-Soy phospholipids ngemvelo yamakhemikhali yi-esters ye-cholinophosphoric acid. Le nto yokwelapha yemvelo inobuhlobo obuhlelekile bezakhi ze-membrane ye-hepatocyte cell - iseli yesibindi.
Uma ingena emzimbeni womuntu, ama-phospholipid e-soy awafakwa kunoma yiziphi izinqubo ze-biotransformation, kodwa athunyelwa ngqo ukuhlangana nezidingo zepulasitiki zomzimba womuntu, ikakhulukazi isibindi.
Ama-phospholipids wezidakamizwa, ngaphezu kokuhlose ukwanelisa izidingo zamanje zepulasitiki zomzimba, ayakwazi ukukhuthaza inkambo yezinqubo ze-endo native zokwenziwa kwezakhi ze-membrane ze-hepatocyte.
Ngaphansi kwethonya le-phospholipids, izinqubo zokuvuselelwa kwesibindi ziya ngokuya ziqina, okuholela ekutheni ingxenye yokuqalwa kokusebenza komsebenzi we-organ detoxation, ibuyisele amandla wesibindi wokuxubha i-bile acid, ngaleyo ndlela inciphise ukuqhubeka kwe-cirrhosis noma i-organ fibrosis.
I-Glycyrrhizic acid, eyingxenye yesidakamizwa i-Phosphogliv, nayo inomsebenzi wemithi. Ngaphansi kwesenzo sale ngxenye yesidakamizwa, izinqubo zokuvuvukala ezenzeka ezicutshini zesibindi ziyacindezelwa, ukwakheka kwama-viral nucleic acid kuyancipha, okugcizelela umphumela we-antiviral, kulingisa amandla okuvikela omzimba wesiguli.
Ngaphezu komphumela we-hepatoprotective, yonke le mishanguzo emithathu ingathuthukisa ukwakheka kwe-lipid ye-plasma yegazi, ivuselele izinqubo zokusetshenziswa kwamafutha ayingozi ne-cholesterol.
I-Phosphogliv - izinkomba zokusetshenziswa
Ukwemukelwa kwesidakamizwa se-hepatoprotective Phosphogliv kukhonjiswa phambi kwezifo ezilandelayo:
Njengengxenye yokwelashwa kwe-hepatitis ethelelekile.
Kubalulekile ukuthi ungakhohlwa ukuthi umuthi ubekwe udokotela oholayo, yize kungabikho ngokuphelele imiphumela emibi kanye nokuthi kungenzeka kwehle ngokweqile.
I-Essentiale - izinkomba zokusetshenziswa
Endabeni ye-Essentiale yezidakamizwa, uhlu lwezimo lapho ungaphuza khona umuthi luyakhula kancane:
I-Toxicosis yabesifazane abakhulelwe,
Isifo sikashukela, njengendlela yokuvimbela izinkinga,
Kusebenza ezithweni zezindawo ezi-hepatobiliary zone,
Ngokokukhuluma ngokuqinile, ungaphuza umuthi we-Essentiale lapho ukhona umbuthano obaluleke kakhulu wezifo, ku-pathogenesis okukhona kuwo indawo yokulimala kwezicubu zesibindi.
Resalut Pro - izinkomba zokusetshenziswa
Ukusetshenziswa kwesidakamizwa i-hepatoprotective Rezalyut Pro kukhonjisiwe kula macala alandelayo:
Ngaphezu kwalokho, zonke izifo, ezinjenge-hepatitis, cirrhosis nokunye, ziphakamisa nokuthi kungenzeka ukuthi kunqunywe lo muthi.
I-Phosphogliv, i-Essentiale neRezalut Pro akufanele ithathwe kumacala alandelayo:
Ukungabekezeleli ezintweni ezisebenzayo,
I-contraindication ehlobene: i-portal hypertension, umfutho wegazi ophakeme, izifo ezinzima ezingamahlalakhona.
Ukufana nokwehluka kwezidakamizwa
Vele, yonke le mishanguzo ifakiwe eqenjini lezidakamizwa elifanayo. Kodwa-ke, imithamo yento esebenzayo ayifani. Kulokhu, umholi uyi-Resalut Pro enama-milligram angama-600 ama-phospholipids. Endaweni yesibili yi-Essentiale, equkethe ama-300 mg wento esebenzayo.
I-Phosphogliv yezidakamizwa ngokushesha iqukethe izinto ezi-2 ezisebenzayo, kufaka phakathi i-phospholipids ne-glycyrrhizic acid, enikeza umuthi futhi nomphumela wokulwa nokuvuvukala.
I-Rezalut Pro ikhiqizwa ukukhathazeka kwaseJalimane iBerlin-Chemie. Inkampani yaseRussia i-Pharmstandard ikhiqiza umuthi i-Phosphogliv. I-Essentiale ikhiqizwa yinkampani yaseJalimane iRon-Pulenck Rohrer.
Uhlobo lomuthi ongawukhetha, udinga ukubuza udokotela wakho. Zonke lezi zidakamizwa ezintathu zizibonakalise kahle ngakho-ke zifanelwe ukwethenjwa ngumthengi.
Isibindi esinempilo siyinkomba eyinhloko yempilo enhle nokubukeka okuhle. Ubuhle besikhumba nezinwele, isisindo somzimba esijwayelekile kanye nokusebenza kwezitho zangaphakathi kuncike emsebenzini omuhle walesi sitho. Ngokuvimbela ukusebenza kwesibindi okunempilo, umhlaba wemithi unikeza izidakamizwa eziningi eziphumelelayo - i-hepatoprotectors.
Le mishanguzo nayo ithathwa ngabantu abahlushwa yizinkinga ezahlukahlukene zesibindi. Futhi yini engcono, iRezalyut Pro noma i-Essential Forte, umbuzo onjalo ukhathaza wonke umuntu obambe iqhaza ekuvuseleleni impilo yabo. Lezi zidakamizwa ezimbili zibhekwa njengenye ye-hepatoprotectors enhle kakhulu. Kepha manje, yikuphi ukukhetha? Sizokhuluma ngalokhu.
Ama-hepatoprotectors ahlukahlukene enzelwe ukwelashwa nokuvimbela isibindi.
Isibindi siyisitho sangaphakathi esibaluleke kakhulu somzimba womuntu, esibhekele umsebenzi wohlelo lokuhlanza umzimba. Ama-enzymes akhiqizwa umsebenzi wesibindi wokuhlanza igazi lobuthi, imikhiqizo ebolayo yotshwala be-ethyl nezinye izinto eziyingozi ezithile.
Amandla wesibindi okuphinda enze kabusha adlala indima enkulu ekubuyiselweni kwamaseli ohlelweni lokujikeleza, ikakhulukazi, amaplatelet namaseli abomvu egazi.
Futhi, isibindi sibandakanyeka ngqo ekukhiqizweni kwama-enzyme abaluleke kakhulu asiza ukuguquguquka nokwenza ngcono ukugaya, kuzinzisa umgudu wokugaya ukudla. Futhi ukuthuthukiswa kwama-hormone wesistimu ye-endocrine edingekayo ekusebenzeni kahle komzimba futhi akwenzi ngaphandle kokubamba iqhaza kwesibindi.
Isibindi yisitho esibaluleke kakhulu somzimba womuntu
Izifo zesitho esibaluleke kakhulu kumuntu ziziveza ngezindlela ezihlukile. Ukusebenza kanye ne-pathologies yesibindi kuyehluka ku:
Njengoba unalolu hlobo lwenkinga, kubaluleke kakhulu ukukhetha kahle umuthi ofanele, ikakhulukazi lapho ufunda i-analogues. Ukunakwa akufanele kugxile kuphela ezindlekweni nasekutholakaleni kwezimali. Ukucatshangelwa kwezinkinga eziseceleni nokusebenza kwaso ngokushesha komuthi kufanele kubhekwe.
Qhathanisa futhi uhlaziye
Ukuthola ukuthi iyiphi i-Rezalyut engcono noma ebalulekile, kufanele ufunde ngokuningiliziwe umphumela nemisindo yemithi ngayinye ngokwahlukana. Futhi yilapho kuphela, lapho usunqume ukuthi wena uqobo lwazo lezi zindawo izidakamizwa, bese uphetha ngokuthi yimuphi umuthi ofanele ofanele kuwe.
Ukwenza lula ukukhethwa nokuqhathanisa iRezalut ne-Essentiale, siphakamisa ukuthi siqhathanise zombili lezi zidakamizwa sisebenzisa lethebula. Ngakho-ke, izici zokuqhathanisa zezidakamizwa.
Izidakamizwa I-Rezalyut Pro Essentiale Forte
ekhemisi zombili lezi zidakamizwa zingamalungu e-hepatoprotectors, aqinisa futhi abuyisele i-hepatocides (amaseli wesibindi), ahlinzeka ngemisebenzi engcono kakhulu yokuvikela yesitho
izakhi ezisebenzayo zifakiwe phospholipids (non-fat), phosphatidylcholine (75%), linoleic acid Omega 6 / Omega 3 kanye nezinsizakalo ezisizayo i-sodium chloride, phospholipids ebalulekile, i-deoxycholic acid, i-riboflavins
ifomu lokukhiqiza amaphilisi kunwebeka futhi kuthambile, kulula ukuyisebenzisa ama-ampoules womjovo kanye namaphilisi okusetshenziswa komlomo
izinkomba zokusetshenziswa i-neurodermatitis, i-cirrhosis yesibindi, i-neurodermatitis, i-hepatic dystrophy, ukungasebenzi kahle kwesibindi ngenxa yokungafundi kanye nokungondleki kahle, i-psoriasis, i-hepatitis, i-hypercholesterolemia i-neurodermatitis, isifo sikashukela, isifo sesibindi se-etiologies ehlukahlukene, i-psoriasis, i-gestosis eyinkimbinkimbi, i-toxicosis yabesifazane abakhulelwe, i-hepatitis
contraindication ukuthambekela komuntu ngamunye kwizakhi ngazinye, i-antiphospholipid syndrome, iminyaka yobudala engafika kwengu-12, isikhathi sokukhulelwa nokukhishwa komzimba ukungabekezelelani komuntu ngamunye kwizakhi, iminyaka efinyelela eminyakeni eyi-12 (amakhemikhali anqatshelwe), kuze kube yiminyaka emi-3 (imijovo iphikisiwe), ukukhulelwa, lapho uncelisa ibele, udokotela unquma ukufanele ukwelashwa
imiphumela emibi engenzeka ngesikhathi sokwelashwa Izinkinga zesisu (i-colic, isifo sohudo, ukuqunjelwa, ukuqunjelwa, ukuqhakaza), ukubonakaliswa komzimba (kaningi esikhumbeni ngesimo se-urticaria kanye nokuqhuma), ukuqina kwesibindi (ukuqina kokuqina kwemithambo yegazi), abesifazane banokopha okungaphezulu ukungahambi kahle kwamathumbu emathunjini (ukuqhakaza, isicanucanu, ukuhlanza), ubuthakathaka obujwayelekile, ukulahleka kokujwayeza, ukungezwani komzimba (okungajwayelekile), ukulunywa kwesikhumba, ukukhipha i-exanthema (ukuqubuka kwesikhumba, isimilo sezifo ezahlukahlukene zamagciwane)
izinga lobungozi bamakhemikhali emzimbeni awunazo, zombili lezi zidakamizwa zinobungani bemvelo futhi azinobuthi
ukusetshenziswa kwe-prophylactic inkambo prophylactic inkambo yokwelashwa lakhiwa uchwepheshe ohambela
ukwelashwa okuyisisekelo Kathathu nsuku zonke esiswini esingenalutho, amaphilisi ama-2 Izikhathi ezi-2 kuye kwezingu-3 nsuku zonke ngemuva kokudla, amaphilisi ama-2
Izithonjana zezidakamizwa I-Lipoid, i-Livolife, i-Essliver, ebaluleke kakhulu, iPhosphoniesle ILivolife Forte, i-Resalut, i-Fosfoncial, i-Esslial, i-Antlive, i-Ovesol
izindleko ezijwayelekile (kuma-ruble)
Amaphaphu ama-10 (blister): 200-250
Amaphilisi angama-30 (ama-3 amaqhubu): 450-500
Amathebhulethi angama-50 (ama-5 blims): 760-800
Amathebhulethi ayi-100: 2000 - 2 500
Izidakamizwa ezi-5 zokujova (ama-5 ml lilinye): 1 000 kuye ku-1,500
izwe lemvelaphi EJalimane
Zombili i-Essentiale ne-Resalut zingatholakala kunoma iyiphi ikhemisi. Bathengiswa ngaphandle kwemithi kadokotela. Kepha ukubonisana okwedlule nodokotela, ikakhulukazi uma ufuna ukusebenzisa i-hepatoprotectors yezifo zesibindi, kuyimfuneko.
I-Resalyut inamaphilisi we-elastic okulula ukuwasebenzisa
Ngaphambi kokusebenzisa le mishanguzo, kufanele utadishe isichasiselo esinamathiselwe kubo. Lokhu kuzohlinzeka ngemininingwane ephelele ephelele ngemiphumela nemiphumela yabo emzimbeni womuntu.
Odokotela, beluleka ukuthi basebenzise umuthi othize, baqondiswa isimo sokuqala sempilo sesiguli, ukuba khona kwanoma yikuphi ukugula okungalapheki. Izici ngazinye zeziguli nazo ziyabhekwa. Lapho usebenzisa i-hepatoprotectors, ukuzelapha ngokwakho akwamukeleki, uma kungenjalo ungasilimaza kakhulu isimo sakho.
Ngokuqhathanisa nokuhlaziywa kwazo zombili lezi zidakamizwa, unganaka ngokushesha umehluko obalulekile wenqubomgomo yamanani. Okubalulekile ngumyalo wobukhulu obiza kakhulu kune-Resalut. Kepha lapha kufanelekile ukubhekisisa ukuthi i-Essentiale inezindlela ezahlukahlukene zokukhipha umuthi. Isibonelo:
Okubalulekile okulula kuzothatha “ama-ruble angaba ngu-700-1,000 kuwe.
Okubalulekile kwe-N, equkethe ekwakhiweni kwayo okuyinkimbinkimbi eyengeziwe, kubiza phakathi kwama-ruble ayi-1 000 ne-1,200.
Okubalulekile ngendlela yemijovo kunemiphumela emibi emincane
Intengo yezidakamizwa yengxenye enkulu ixhomeke kunani lama-ampoules / amaphilisi anikelwe afakiwe kuphakethe elilodwa. Ekhuluma ngezimpawu ezihlukanisa womabili la mathuluzi, kubalulekile ukugcizelela okulandelayo:
Umehluko ekwakhekeni, yize iningi lezingxenye ezifakiwe, ziyefana.
I-Resalyut ithengiswa emaphaketheni wokuphatha ngomlomo, futhi Okubalulekile kungasetshenziselwa ukujova.
Kunokwehluka okuthile kuhlu lwe-contraindication.
Izifundo zokwelapha nazo ziyahlukahluka (inani lamaphilisi athathiwe). Yize kunjalo kuleli cala, udokotela anganikeza isithombe esihluke ngokuphelele kokwelashwa.
Impela umehluko obalulekile entengo.
Sicela wazi ukuthi i-Resale ifaka i-Omega acid. Lezi zinto zisiza ukusebenza kwama-receptors obuchopho futhi zenze kusebenza okujwayelekile kohlelo lwezinzwa oluphakathi.
Uma izinkinga zesibindi zisekelezwe ngemuva kwama-neurodermal pathologies, ukukhetha kufanele kwenziwe ekuvumeleni kabusha nge-Omega fatty acids.
Zombili lezi zidakamizwa ziseqenjini elilodwa lezemithi, okukhombisa ukuthi ungubani umgomo womthelela wazo emzimbeni nasekusebenzeni kwawo. Ngakho-ke, ukukhetha phakathi kwalezi zidakamizwa ezimbili, kufanelekile ukugxila ezicini zomzimba ngamunye.
Uma siqhathanisa i-Essentiale ne-Resalute ngohlobo lokusebenzisa kwabo, khona-ke umuthi ohloselwe ukuphatha umjovo womuthi yiwo ophumelela kakhulu, ngoba imijovo:
boniswa okungenani kwemiphumela emibi,
ngokungafani namaphilisi, imijovo ayidali izinkinga emgodini wokugaya ukudla, ikakhulukazi, ubuhlungu nokungaphatheki kahle kwesisu.
Uma uqhathanisa zombili lezi zidakamizwa, usangabaza ukukhetha okulungile, gxila kuthuluzi elithengwa kakhulu ngezimali. Ngemuva kwakho konke, ukwakheka kwayo yomibili le mithi kucishe kufane, futhi, ngenxa yalokho, umphumela wazo uzofana.
Isibindi esinempilo siyisiqinisekiso sokuthi uzozizwa ukahle futhi ubukeke uthandeka. Ubuhle bezinwele, umbala nokwakheka kwesikhumba, isisindo esijwayelekile nezinye izinto ezibalulekile kuncike emsebenzini walesi sitho. Ama-heepatoprotective agents angasiza isibindi ukuthi sisebenze ngokugcwele futhi sisivikele emiphumeleni yezinto ezingezinhle. Yini engcono - Resalute or Essential? Masithole impendulo yombuzo ovuthayo ndawonye.
I-Resalut noma i-Essentiale - qhathanisa izingoma
Ukwakheka kuchazwe ngokupakishwa. Ngokuqala kokuqala, kungabonakala sengathi yonke into ilula kakhulu, umuthi unento eyodwa kuphela esebenzayo, i-phospholipids eyenziwe isitshalo. Kepha miningi imininingwane efihlekile ngemuva kwaleli gama. Okubalulekile, okungukuthi, kuyadingeka emzimbeni womuntu, ama-phospholipids akhishwe kuma-diglycerin esters we-cholinophosphoric acid. Babuye batholakala nama-acid angenasisekelo, anjenge-linoleic, linolenic namanye. Okubalulekile, okuqukethwe yi-linoleic acid kufinyelela ku-70%. Futhi, i-amavithamini eyinkimbinkimbi iyabandakanyeka kulungiselelo oluthuthukisa ukusebenza kwesibindi futhi isheshise izinqubo zokuvuselela kabusha kulesi sitho:
Ukwakheka kwe-Resalut kukhonjisiwe nangamagama nje ambalwa, lawa ngama-phospholipids e-soybean. Eqinisweni, lokhu kwakhiwa kufana nokwakheka komuthi obalulekile. Kepha eqinisweni, abakhiqizi be-Resalut babonisa izithako ezisebenzayo zomuthi, njenge phosphatidylcholine ne-phosphoglycerides. Lezi zinto zinomphumela oqinile we-hepatoprotective futhi zimunca kahle izindonga zamathumbu, kepha umphumela wazo uhlala umfushane kunalowo wama-phospholipids avela kuma-asidi angenawo amafutha.
Uyini umehluko phakathi kwezenzo zeRezalut nezibaluleke kakhulu?
Zombili lezi zidakamizwa zithuthukisa amaseli wesibindi futhi zenze i-cholesterol yegazi ijwayelekile. Ngaphezu kokuzwela komuntu ngamunye kwezakhi nokukhulelwa, azinakuphikiswa. Usebenzisa iRezalut ne-Essential emaphaketheni, kufanele athathwe amaphilisi ama-2 ekuseni nakusihlwa, aphuze amanzi amaningi ahlanzekile. Amaphilisi ngeke aqhekeke, ngenxa yalokhu, izingxenye zokupholisa zomuthi zizohlushwa imvelo ye-caustic yesisu. Ukwehlukahluka kwalezi zimali kucishe kufane futhi kufinyelela kuma-70%, izidakamizwa zikhishwa izinso kungakapheli amahora angama-6-7 ngemuva kokuphathwa, inkambo encane yokwelashwa izinyanga ezintathu. I-Essentiale ngendlela yesisombululo somjovo ikhombisa ukusebenza okukhulu kakhulu. Izinkomba zokusetshenziswa kwomuthi yilezi:
isifo sokuqina kwesibindi
ukonakala kwamafutha kwamaseli wesibindi,
ukulimala kwesibindi okubangelwa izinto ezinobuthi nemithi.
Lezi zifo ezifanayo ziyisizathu sokuthatha i-Resalyut. Futhi, la makhompiyutha asetshenziswa ekwelashweni. i-psoriasis, i-dermatitis kanye nokungondleki.
Qhathanisa i-Essential Forte neRezalut babizwa ngamaqembu amaningana ososayensi bangaphandle. Imiphumela yocwaningo ikhombise ukuguquguquka okuphelele kwale mishanguzo emibili, uma sikhuluma ngesimo sokukhishwa emaphaketheni. Okubalulekile ngomjovo ithuluzi elisebenza kakhudlwana elinemiphumela emibi embalwa. Ngokungafani namathebulethi, akubangeli usizi esiswini nobuhlungu esiswini.
Uma ubheka okungcono ukuthenga - iRezalut, noma i-Essentiale forte, unganqikazi ukukhetha, khetha umuthi oshibhile. Iqiniso ngukuthi imiphumela yezidakamizwa nokwakheka kwazo icishe ifane, kodwa inani lentengo emakhemisi ahlukene lingahluka kakhulu. Kwamanye amanethiwekhi wemithi, iRezalut ibiza kakhulu, ngoba ingumuthi ongenisiwe, kwabanye - ithegi yentengo iphakeme ngokubalulekile.
I-Resalute Pro iyi-hepatoprotector esekwe kwisithako se-soybean phospholipids. Ama-phospholipids wona kanye “izitini” ezakha ulwelwesi lwamaseli we-hepatocytes, futhi, uma kwenzeka okuthile, angakwazi “ukubopha” izikhala ezivelile. Lezi lipids eziyinkimbinkimbi, ngcono ukugeleza nokuguquguquka kwezinduna, zenze kube ngokwejwayelekile imvume yazo nomsebenzi wesithintelo. Ngaphezu kwalokho, ama-phospholipids athinta kahle iphrofayili ye-lipid, asebenze njengama-antioxidants (ngoba anekhono lokuphula izibopho eziphindwe kabili zama-radicals wamahhala), azinza izici ze-bile ze-anhibibrotic kanye nemiphumela yokulwa nokuvuvukala. Ukusebenza kabusha kwe-Resalyut (vumela umfundi athethelele le-pun encane) umphumela wakhe we-hepatoprotective ngokufaka ama-phospholipids we-polyunsaturated ezindaweni ezilimele ze-hepatic cell membranes futhi aqhubeke nokubuyisela isakhiwo sawo. I-pharmacological "core" resalute pro - soybean phospholipid ekhishwe - iqukethe i-phosphatidylcholine ne-phosphoglycerides. Ukwahluka kwesidakamizwa kuqinisekiswa ngokungafani kobuchwepheshe bokukhiqiza: inqubo iqhubeka ngaphansi kwezimo ze-anaerobic, ikuqede ngokuphelele ukungena komoya ngokusebenzisa i-capsule yomthungo engenantambo. Ukubaluleka kwalesi simo kunzima ukukudla ngokweqile, kusukela uma kungenjalo, ama-phospholipids angakhipha amandla ku-hydroperoxides eyingozi esibindini. Lobu buchwepheshe abugcini nje ngokugcina zonke izakhiwo ezizuzisayo zama-phospholipids, kepha futhi bugwema ukungezwa kwezengezo ezingefani ezahlukahlukene - abaqinisi, abalondolozi, udayi. Ngenxa yokuba khona kwama-acid acid e-polyunsaturated (i-linoleic ne-linolenic) ekwakhiweni kwayo, i-resalut nayo inikezwe izakhiwo ze-hypocholesterolemic, ezivumela ukuthi zisetshenziswe njenge-ejenti ye-antiatherossteotic kwiziguli ezinesifo senhliziyo nesifo se-metabolic. I-Polypharmacy, inhlanganisela engaba yingozi yezidakamizwa eziningana, njengamanje ibhekwa njengenye yezinkinga ezinkulu kakhulu zomtholampilo.
Ngokwezibalo ze-WHO, cishe i-20% yazo zonke izinhlanganisela zamakhemikhali ziyingozi. Ukuvimbela imiphumela enobuthi yokuhlanganiswa kwezidakamizwa esibindini, ukuthengisa kabusha ukuthengisa kungasivikela kakhulu isiguli ezinkingeni zezempilo. Ukusebenza ngempumelelo nokuphepha kohlobo lwemali ye-pro kuqinisekisiwe ezifundweni eziningi ezinkulu, esinye sazo esenziwa odokotela abahlinzeka usizo lwasekhaya ezinhlanganweni ezingama-55 ezinakekela ezempilo emadolobheni ayisithupha aseRussia futhi savunywa yikomidi elizimele le-Ethics Multidisciplinary Ethics Committee.
I-Phosphatidylcholine, enye yezakhi zokwengeza, ibhujiswa emathunjini amancane iye ku-lysophosphatidylcholine futhi imunca ikakhulukazi ngesimo esifanayo. Njengoba usungene odongeni lwamathumbu, i-lysophosphatidylcholine ihlanganiswa ngokwengxenye ukuze yenziwe i-phospholipid, ethi kamuva ingene esiteshini sokujikeleza ngokugeleza kwe-lymph. Ingxenye ye-lysophosphatidylcholine iphulwe phansi esibindini ngokwakhiwa kwamafutha acid, i-choline ne-glycerol-3-phosphate. Egazini, i-phosphatidylcholine, njengamanye ama-phosphoglycerides, ibopha i-albhamuin kanye / noma lipoprotein. Isabelo sengonyama se-soybean phospholipids singenile, equkethe inani elikhulu le-3-sn-phosphatidylcholine, sihlanganisa nama-phospholipids awo ama-endo native kungakapheli amahora angama-3-4.
I-Rezalyut pro iyatholakala kumakhompiyutha. Ngokusho kwezincomo ezijwayelekile, umuthi uthathwa ngamaphilisi ama-2 amahlandla ama-3 ngosuku ngaphambi kokudla, ugezwe ngenani elincane lamanzi. Isikhathi sokwelashwa sinqunywa yizici zenkambo yesifo kanye nezimpawu zomuntu ngamunye. Amacala wokungalingani kwezidakamizwa awazange abikwe kuze kube manje. Kodwa-ke, umuntu akufanele abeke eceleni ukusebenzisana okungenzeka kwe-pro-lwemali pro nama-anticoagulants eqembu le-coumarin (warfarin, fenprocoumonon). Uma inhlanganisela enjalo yamakhemikhali ingenakugwenywa, ukulungiswa komthamo kwayo yomibili le mishanguzo kungadingeka. Ekuphetheni, kuyadingeka ukuthi uqaphele isimo eseqile se-rezalyut pro, esiyenza ifinyeleleke ezigulini ezahlukahlukene.
Isidakamizwa se-hepatoprotective. I-Soybean phospholipid ekhishwe iqukethe i-phosphatidylcholine ne-phosphoglycerides (ngokwesilinganiso, ngamaphesenti angama-76), kuyilapho i-linoleic acid ihamba phambili kuma-asidi anamafutha. Umphumela we-hepatoprotective womuthi ubangelwa ukushesha kwenqubo yokwenziwa kabusha kwamaseli wesibindi nokuqina kwezingqimba zamangqamuzana, ukuvimbela kwenqubo ye-lipid oxidation kanye nokucindezelwa kokuqanjwa kwe-collagen esibindini. Umuthi ubuyekeza i-lipid metabolism, wehlise i-cholesterol ngokwandisa ukwakheka kwama-esters ayo ne-linoleic acid.
Izifundo ze-pharmacokinetics ze-phosphatidylcholine zikhombise ukuthi iphuka emathunjini iye ku-lysophosphatidylcholine futhi igxilwe ikakhulukazi ngesimo esifanayo. Ngokwengxenye, ukuvuselelwa kwayo ku-phospholipid kwenzeka odongeni lwamathumbu, okuthi lapho kudlula emithanjeni ye-lymphatic kulombhede ojikelezayo, ingxenye ye-lysophosphatidylcholine igqekeze esibindini ibe ngama-asidi anamafutha, i-choline ne-glycerol-3-phosphate.
Ku-plasma, i-phosphatidylcholine namanye ama-phosphoglycerides aboshelwe ngokuqinile kuma-lipoprotein kanye / noma kwi-albhamuin.
Iningi lama-phospholipids ethuliwe anokuqukethwe okuphezulu kwe (3-sn-phosphatidyl) - i-choline ihlanganiswa ngendlela yama-metabolites nama-phospholipids womzimba amahora amaningi. Ukuchithwa kwabo kuhambelana nokwenziwa kwama-phospholipids omzimba noma ama-metabolites abo.
Amakhebuli angama-gelatinous, esobala, angenamibala, awokugqamile, okuqukethwe ngamakhompiyutha kuwuketshezi olungabonakali kusuka ku-golden yellow kuya ku-brown-brown.
Abagcotshwa: uwoyela we soya ocoliweyo.
Ukwakheka kwegobolondo ye-capsule: i-gelatin, glycerol 85%.
Ama-10 ama-PC - Izinhlavu (1) - amaphakethe ekhadibhodi.
Ama-10 ama-PC - Izinhlavu (3) - amaphakethe amakhadibhodi.
Ama-10 ama-PC - Izinhlavu (5) - amaphakethe amakhadibhodi.
Umuthi wenzelwe ukuphathwa ngomlomo.
Ngaphandle kokuthi kuboniswe ngenye indlela, thatha ama-cap angu-2. I-Rezalyut ® Pro izikhathi ezi-3 / ngosuku ngaphambi kokudla, ngaphandle kokuhlafuna nokuphuza uketshezi oluningi.
Isikhathi sokwelashwa sincika enkambweni yalesi sifo.
Amacala wokungalingani awaziwa kuze kube manje.
Kodwa-ke, ukusebenzisana kwesidakamizwa iRezalyut ® Pro nge-coumarin anticoagulants (ngokwesibonelo, fenprocumone, warfarin) akunakuphikwa. Uma ukwelashwa okuhlanganisiwe okufanele kungenakugwenywa, kungahle kudingekile ukulungisa umthamo womuthi.
I-hypersensitivity to phospholipids, amantongomane, isoy nezinye izakhi zomuthi,
Ngokuqapha: izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12.
Ayikho imininingwane ngokuphepha komuthi ngesikhathi sokukhulelwa. Ngakho-ke, i-Rezalut ® Pro kufanele isetshenziswe kuphela uma inzuzo okuhloswe ngayo ukuthi kunina idlula ubungozi obungahle bube khona kuzingane.
Akukho datha ekungeneni kwesidakamizwa iRezalyut ® Pro ubisi lwebele, ngakho-ke, uma kunesidingo, ukusetshenziswa komuthi i-Rezalyut ® Pro ngesikhathi sokubeletha, ukuncelisa amabele kufanele kuyekwe.
Izici ezijwayelekile nezakhiwo kufaka phakathi lezi zinhlaka ezilandelayo:
Kukhona ukufana kwezidakamizwa. Zingashintshwa futhi ngomunye.
Ngaphambi kokuvunyelwa ngenhloso yokuvimbela, kufanelekile ukubonisana nochwepheshe.
Ngomzimba womuntu, yomibili le mithi inokuphepha kwamakhemikhali nokunobuthi.
Kunezinkomba ezifanayo, ama-contraindication kanye nemiphumela emibi kuyo yomibili imishanguzo.
Ama-phospholepids angenamafutha akhona ezidakamizweni ezimbili, kepha umthamo uhlukile.
Zingamalungu eqembu elilodwa lezemithi.
Izwe elivela kulo liyafana - Germany. Kepha amafemu ahlukile.
Ukwakheka kwe-Essentiale yezidakamizwa
Ngokufunda ukwakheka kwalesi sidakamizwa esikhonjiswe kwiphakheji, ungabona ukuthi iqukethe ingxenye eyodwa kuphela esebenzayo, okuyiziphospholipids zesitshalo. Ama-phospholipids, abaluleke kakhulu emzimbeni womuntu, atholakala ku-cholinophosphoric acid nasezitolo ze-diglycerin.Ngaphezu kokuthile okusebenzayo okusebenzayo, Okubalulekile kuqukethe uhlu olulandelayo lwamavithamini:
I-Tocopherol (Vitamin E),
I-Riboflavin (Vitamin B2),
I-Pyridoxine (Vitamin B6),
I-Nicotinamide (Vitamin PP),
I-Pantothenic acid (Vitamin B5).
Lokhu kungenxa yokuthi amavithamini e-B abamba iqhaza ezinhlelweni zokuvuselela izicubu zesibindi, ezivame ukulinyazwa ezifweni ezahlukahlukene.
Izinkomba zokuthatha izidakamizwa
Naphezu kokufana kokuqanjwa, ama-hepatoprotectors athi “Rezalyut” no “Okubalulekile” anohlu oluhlukile lwezinkomba ezisetshenziswayo.
Izinkomba eziphambili zokusetshenziswa kwesidakamizwa i- “Resalyut” zifaka:
Ukulimala kwe-Cirrhotic kwezicubu zesibindi (i-cirrhosis) ngenxa yokuvezwa kwezinto ezinobuthi kanye nobuthi,
Ukonakala kwamafutha kwezicubu zesibindi,
Isifo sokusha kwesibindi
Izimo ezihambisana nokwanda kokuhlushwa kwe-cholesterol egazini.
Ukusetshenziswa kwomuthi "Okubalulekile" kuyelulekwa kuzo zonke izimo ezingenhla, nakwezinye izifo eziningi, phakathi kwazo okungukuthi:
Njengengxenye yokwelashwa okuyinkimbinkimbi kwe-psoriasis,
Ngesikhathi sokukhulelwa nge-toxicosis,
Ngokushintshwa kwe-necrotic kumaseli wesibindi okubangelwa ukulimala kwesitho esinobuthi,
Esikhathini sokusebenza noma se-postoperative, ikakhulukazi uma ukuhlinzwa kwenziwa ezingxenyeni zohlelo lwe-hepatobiliary,
Ngomonakalo kwezicubu zesibindi ngemisebe.
Izinkomba zokusetshenziswa, isenzo se-pharmacological nokwakheka
Iseli ngalinye lesibindi lifakwa yi-bilayer yama-phospholipids, ngenxa yokuthi isibindi, empeleni, senza imisebenzi yaso, ikakhulukazi ukuhlunga. Ngemiphumela emibi kakhulu esibindini kusuka ngaphandle: ukungondleki, okuholela ekukhuluphiseni, ubuthi (kubandakanya notshwala) ubuthi, ukuvezwa kwezidakamizwa, izimo zezemvelo, njll., Ama-molecule we-phospholipid ayonakaliswa futhi abhujiswe. Amafomu wegebe endaweni ethintekile, okuholela ekubhujisweni kolwelwesi lwesibindi lwesibindi.
Umzimba womuntu onempilo ngokwawo uyakwazi ukubuyisela ukulahleka kwe-phospholipid futhi ubakhiphe ekudleni. Kodwa-ke, amathuba wokusekelwa kwemvelo isikhathi eside semiphumela ebhubhisayo angahle angabhekane nezidingo. Isibonelo, ukuhlala endaweni yezimboni noma umlutha wobhiya onamafutha ababhemayo - yilezi zimo uqobo. Ngaphezu kwalokho, ukudla okune-phospholipids kuvame ukuqukethe inani elithile le-cholesterol, edinga ukucutshungulwa ukuze ingalimazi futhi ingahlali emikhunjini ebumba.
Phakathi kwe-hepatoprotectors, odokotela banikeza okuthandwa yilabo abasuselwa kuma-phospholipids abalulekile. Bakufakazele kaningi ukusebenza kwabo ekubuyiselweni kwamaseli we-membrane yesibindi futhi baphephile kwezinye izitho zomzimba.
"I-Rezalyut Pro" evela "Berlin-Chemie" yaseJalimane ifakiwe enkambweni yami yokwelashwa. Lokhu okusha phakathi kwe-hepatoprotectors, njengoba udokotela angitshele. I-"Resalute" isetshenziselwa izifo ezibalulekile zesibindi: i-hepatosis enamafutha, i-hepatitis, i-cirrhosis, ukulimala kwesibindi esinobuthi, i-cholesterol ephezulu egazini, uma ukudla nokudla okuyikho kungasizi. Futhi kunconyelwe ukuvimbela ukuphazamiseka kanye nokugcinwa kwesibindi.
Into esebenzayo e-Resalut ingxenyana yama-phospholipids abalulekile avela ku-soya asondele kakhulu kulawo akhiqizwa ngumzimba uqobo. Futhi-ke, azenqatshwa futhi ziyakwazi ukufaka esikhundleni ngokushesha "abafowethu" abonakele kulwelwesi lwezitho zesibindi.
Ama-phospholipids athinta kahle i-cholesterol metabolism emzimbeni, evimbela ukukhula kwe-atherosulinosis, futhi futhi avimbele izinqubo ze-lipid peroxidation, anciphisa ukwakheka kwama-radicals wamahhala.
I-capsule eyodwa ye-Rezalyuta pro iqukethe ama-300 mg. ama-phospholipids abalulekile nababukeli: i-glycerol mono / dialkonate, ama-triglycerides, uwoyela ohlotshisiwe wesoya, α-tocopherol. Konke lokhu kuyigobolondo le-gelatin ne-glycerol. Umkhiqizo wemvelo ngokuphelele.
Ukuba khona kwe-Vitamin E ekuhlelweni kuthuthukisa izakhiwo zayo ze-antioxidant, kuvikela amaseli wesibindi ekuvuvukeni, imiphumela elimazayo yama-free radicals.
I-Resalut noma i-Essentiale forte - ukuhlaziywa kokuqhathanisa kwezidakamizwa ezimbili
Isitho sangaphakathi somzimba womuntu - isibindi, singesinye sezitho ezibaluleke kakhulu zohlelo lokuhlanza nokufukula. Umsebenzi wokuhlunga uvumela isibindi ukuhlanza igazi lomuntu, futhi ukusebenza kwalo kabusha kudlala indima enkulu ekubuyiselweni kwamangqamuzana amaseli egazi.
Isibindi sisabandakanyeka ekwenziweni kwama-enzyme anjalo anomthelela ekujwayekeni kokugaya kanye nokutholwa kokudla ngokusebenzisa ipheshana lokugaya ukudla. Ukukhiqizwa kwama-hormone athile kanye nokugcinwa kwezinga lawo nakho kunikezwa ngenxa yokubandakanyeka kwesibindi kwakamuva ohlelweni lwe-endocrine.
Izifo zesibindi zihlukile, ukungasebenzi komzimba kuhlukile komunye nomunye ekujuleni kobuso, ekuchazeni kokukhubazeka, esimweni sesifo. Kungakho kubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe ngokucophelela imithi enikezwa udokotela, noma iphakathi kwezimpawu.
Ukubeka umsebenzi, ukuthola impendulo yombuzo: "Yini engcono iRezalyut noma i-Essential Forte?" Kufanele ucabangele kuqala isidakamizwa ngasinye ngawodwana. Ngemuva kwalokho-ke kungenzeka ukuthi kutholakale ezinye zezindawo zabo ezijwayelekile ukunquma ukuthi umuthi othile ufanelekile yini ekwelapheni ukuphazamiseka kwesibindi okuthile. Ngenxa yetafula elikhethekile, ungatadisha zonke izakhiwo zemithi ngasikhathi sinye.
Ithebula lezimpawu zokuqhathanisa zemithi ye-hepatic - "Resalute" ne "Elsential Forte":
I-heepatoprotective ejenti - ukuqinisa, ukuvuselela, ukucebisa amaseli wesibindi, ukwenza ngcono imisebenzi yokuvikela umzimba.
ama-phospholipids abalulekile avela ku-soya,
ama-riboflavins nezinye izengezo ezisizayo.
I-Omega linoleic acid (3 no-6),
Amakhebuli, ama-ampoules omjovo.
Izinkomba zokusebenzisa ukwelashwa
ukubonakala nokwanda kwe-neurodermatitis,
ukhela kwesibindi, ukuqothuka,
ukuphazamiseka kwengqondo kwesiguli,
I-toxicosis ekhangisiwe yabesifazane abakhulelwe,
noma yiliphi i-hepatitis.
1. Uma ukungabekezelelani okuthile ngomuthi kuqoshwa.
Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala akufanele zisebenzise umuthi emaphashini, aze afike eminyakeni emi-3 - imijovo.
3. Omama abangabahlengikazi babekwa ngawabo.
1. Ukutholwa noma ifa lokungakubekezeleli kwezinto ezisetshenziswayo kulo muthi.
2. I-Antiphospholipid syndrome.
3. Izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-12 akufanele zisebenzise lo muthi.
4. Omama abakhulelwe futhi abancelile akufanele baphuze umuthi.
Imiphumela emibi nokusetshenziswa kabi kwesidakamizwa
ukungakhululeki, kuqhakaza ngaphakathi esiswini,
isicanucanu, ubuthakathaka, ukugabha, ukudideka komoya, isiyezi,
i-urticaria noma ukulunywa kwesikhumba okujwayelekile,
ukuvuvukala kwesikhumba lapho kwenziwa khona umjovo, noma lapho kwakubekwa khona isigaxa.
I-GI icasukile - isifo sohudo, i-colic, ukuqhakaza,
izinkinga ze-allergic - i-rash, i-urticaria,
ukopha okuphakathi kweziguli.
Isabelo sokuphepha kwamakhemikhali emzimbeni
Umkhiqizo wezidakamizwa ophelele onemvelo.
Ukuthatha umuthi njengesilinganiso sokuthintela
Ukuvimbela kufanele kwenziwe ngokwesheduli ebekwe udokotela.
Amaphilisi amabili kathathu noma kathathu ngosuku ngemuva kokudla.
2 amaphilisi izikhathi 3 ngosuku ngaphambi kokudla.
"Resalut" "Antrlyv", "Livolife Forte", "Esslial", "Ovesol", "Phosphoncial" nezinye izindlela.
I-"Brenziale", "Lipoid", "Ibalulekile" yanoma yiluphi uhlobo lokukhishwa, "Essliver", "Livolife" noma "Phosphoncial".
Intengo yesidakamizwa (isilinganiso)
Ama-50 ama-PC. amaphilisi - 750-900 rub.
Ama-pcs ayi-100 amaphilisi - 2000-2500 rub.
Ama-ampoules ama-5 (5 ml) - 950-1500 rub.
Ama-10 ama-PC ku-blister eyodwa - ama-ruble angama-220.
Ama-30 ama-pcs (Ama-3 maletha) - ama-ruble angama-480.
Ama-50 ama-PC. (Amabhlaza ama-5) - ama-ruble ayi-750.
EJalimane, uA. Nattermann & Cie. "
Yonke le mishanguzo itholakala kalula kunoma iyiphi ikhemisi, esatshalaliswa ngaphandle kokulethwa ngemiyalelo evela kudokotela. Ngaphambi kokuthenga, ungacela umthengisi ukuthi akunikeze ufunde imiyalo yomuthi othile ukuze ube nesithombe esiphelele kakhulu somphumela waso emzimbeni.
Lapho utadisha umuthi, kubalulekile ukunaka isimo sempilo yakho, izici zomzimba ngamunye, kanye nanoma yiziphi izifo ezihlangene. Ukuze ungakhulisa inhlalakahle yakho futhi ungazenzi ube ngcono, kungcono ukubonana nodokotela wakho futhi ukuthi yisiphi isidakamizwa okufanele usikhethele ukubuyisela nokugcina isibindi.
Izici zokuqhathanisa zalezi zidakamizwa ezimbili nemiphumela yako zinaka ngokushesha amanani, umehluko wazo obalulekile. Okubalulekile ama-oda ambalwa wobukhulu abiza kakhulu kune-Resalut. Noma kunjalo, kufanele kukhunjulwe ukuthi ama-Essentials ahlukile - kunezindlela ongakhetha kuzo futhi eshibhile. Ama-Essentials alula azobiza kusuka kuma-ruble angama-720 kuya kwangama-950 ngephakethe ngalinye, kanye nama-Essentials N - kusuka kuma-ruble angama-950 kuya kwangama-1150. Okuningi kuncike ekugxileni kwezinto zokwelapha eziqukethwe kulungiselelo, kanye nakubungako kanye nenani lamaphilisi, ama-ampoules kwiphakeji.
Ezinye izici ezihlukanisayo yilezi ezilandelayo:
Ukwakheka kwezidakamizwa kuhluke kancane, yize zinezinto ezifanayo.
I-Rezalyut itholakala kuphela kumaphilisi athambile. Futhi Okubalulekile - kumakhompiyutha omlomo nama-ampoule womjovo.
Kunomehluko kuzinkomba nakuma-contraindication okusetshenziswa kwezidakamizwa.
Izindlela nezifundo zokwelashwa zingahluka. Yize lapha konke kuhlelwe ngawodwana.
Umehluko omkhulu ezinkampanini zamanani nezokukhiqiza.
I-Resalut iqukethe i-Omega (polyunsaturated fatty acids), esiza ukusebenza kusebenze ubuchopho futhi iguqule uhlelo lonke lwezinzwa ngendlela evamile. Ngakho-ke, uma ukuphazamiseka kwesibindi kungama-neurodermic, khona-ke kunengqondo ukuthatha i-Resalut, lapho kune-Omega.
Amapharamitha ajwayelekile nezakhiwo zezidakamizwa
Izakhiwo ezilandelayo zingabikwa ezimeni ezijwayelekile nezimpawu zemithi:
Iqembu elijwayelekile lezemithi elingelabo.
Zombili lezi zidakamizwa ziqukethe ama-phospholipids angenamafutha, kepha kuphela kumithamo ehlukile.
Imiphumela emibi, izinkomba kanye ne-contraindication ziyefana kumuthi owodwa, nakomunye.
Zombili lezi zidakamizwa zinezindlela ezinobuthi, zokuphepha kumakhemikhali emzimbeni womuntu.
Futhi, yomibili le mithi ngezinhloso zokuvimbela kufanele ithathwe kuphela ngemuva kwezincomo nokubonisana nodokotela.
Ukufana kwezidakamizwa kuyafana futhi kuyafana. Le mithi emibili ingahle ithathe indawo yomunye.
Iqiniso lokuthi zombili lezi zidakamizwa eziseqenjini elilodwa lezokhemisi libonisa ukuthi imisebenzi nemiphumela yazo emzimbeni icishe ifane. Izwe lemvelaphi efanayo, kepha amafemu ahlukile.
Uma wenza ucwaningo lwakho oluncane ukuze ukhethe umuthi omuhle kakhulu, kufanele unake njalo izici zomzimba wakho ngamunye, ukubuyekezwa kodokotela nabathengi. Ngingasho ukuthi yimuphi umuthi ongcono? Ukuze wenze lokhu, udinga ukuqhathanisa ngokucophelela zonke izici zemithi, futhi uqhathanise nekhono lomzimba wakho bese ubheka izibuyekezo zalabo asebekwenzile ukukhetha okunjalo.
Ngonyaka owedlule, ngangeniswa esibhedlela ngokulimala kwezinso. Ngemuva kwalokho kwavela ukuthi isibindi sami sasingalungile noma ngabe, yize lokho akuzange kungikhathaze. Kepha isibindi sethu siyisitho esigulayo, asihlukumezi kuze kuba isimo sibucayi. Ngakho-ke, akufanele ulinde ukuthi "iqhude likulume" ngakwesokunene, ngeke kulimaze ukumsekela nge-hepatoprotectors. Le yimithi enjalo ethuthukisa isimo sesibindi. Okuthandwa kakhulu kuzo yi-Essential Forte N, Resalute Pro ne-Essliver Forte.
Imininingwane ejwayelekile nokwakheka
Umuthi weRezalyut Pro ungoweqembu lama-hepatoprotectors abhekene nokusebenza okujwayelekile kwamaseli wesibindi (i-hepatocytes). Umuthi ukuvumela ukuthi ubuyisele amangqamuzana athintekile futhi unesandla ekululameni kwawo ngokushesha. Umuthi ukhiqizwa kusetshenziswa ubuchwepheshe obukhethekile obungenawo umoya-mpilo. Usizo lwayo ukushoda kwama-flavourings kanye nama-preservatives.
Umphumela wokwelapha ophakeme we-Resalyut kungenxa yezakhi zawo, eziholwa yi-Lipoid PPL 600, equkethe i-triglyceride, i-lecithin, i-acid enamafutha edliwayo, uwoyela ocoliweyo we-soybean, i-α-tocopherol, i-mono ne-glycerol dieter. Njengezinto ezisizayo, i-glycerol, uwoyela wesoya ocoliweyo kanye nesenzo se-gelatin.
Isici Sendawo Pro
Le hepatoprotector, etholakala ngefomu le-capsule. Ingxenye yayo eyinhloko ama-phospholipids. Umphumela we-hepatoprotective womuthi uphakamisa ukuvuselelwa kwamaseli wesibindi futhi uqinise ama-membrane amaseli, uvimbela izinqubo ezikhona ze-lipids, futhi uvimbela ukwakheka kwe-collagen esibindini. I-Resalut Pro yehlisa i-cholesterol yegazi futhi ijwayele ukusebenza kwe-lipid metabolism.
ukulimala kwesitho esinobuthi,
ukonakala kwamafutha kwesibindi ngokuthuthukiswa kwezinqubo zokuwohloka,
ukulungiswa kokudla okungenakulinganiswa ngesikhathi sokulahlekelwa isisindo.
Umuthi uphulwe emacaleni alandelayo:
hypersensitivity kuzakhi zomkhiqizo,
iminyaka efinyelela eminyakeni eyi-12.
Abesifazane abakhulelwe kufanele baphuze umuthi ngokuqapha.
isifo sohudo, ukungaphatheki kahle esifundeni se-epigastric,
i-urticaria, ukuqubuka kwesikhumba,
kuyaqabukela - ukuphuma kwegazi kwabesifazane ngesikhathi sokuya esikhathini, ukuqubuka kwamathambo.
I-overdose yesidakamizwa ayihleliwe.
I-Resaly ingavusa uhudo, ukungakhululeki esifundeni se-epigastric.
Isici Esibalulekile se-Forte
Le yi-hepatoprotector, efaka phospholipids yemvelo. Umzimba uhlala udinga lezi zihlanganisi zangaphandle, ngoba amaseli awo awazenzi. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwalo muthi kufaka phakathi amavithamini B6, B12, B3, B1, B2, E. Uhlobo lomthamo wezidakamizwa ngamaphilisi. Amavithamini asiza ukuthuthukisa umphumela wama-phospholipids noma enze ukuntuleka kwawo kwezicubu nezitho zomzimba.
I-Essentiale inemiphumela elandelayo esibindini:
ibuyisela ubuqotho bezitho zamangqamuzana,
ithuthukisa i-protein ne-lipid metabolism,
kusebenze umsebenzi wama-enzymes we-membrane,
gcina ubuqotho kanye nokwakheka kwama-membranus amaseli wesibindi,
inciphisa noma isuse ukungena kwe-hepatocyte okunamafutha,
uphendulela amafutha, kufaka phakathi i-cholesterol, kwezinye izinhlobo ezisetshenziswa amaseli ukukhipha amandla,
kwandisa inani le-glycogen esibindini,
kunciphisa amathuba emathumbu
kunciphisa amathuba okukhula kwe-fibrosis, sclerosis kanye ne-cirrhosis.
Ngaphezu kwalokho, umuthi unomphumela omuhle kwezinye izitho nezinhlelo:
kunciphisa ubunzima bezimpawu zesifo sikashukela,
iqeda ama-plaque atherosclerotic,
kwehlisa ukubukeka kwegazi futhi iguqule ukugeleza kwayo ngokweqile.
Lesi sidakamizwa sibekezelelwa kahle, ngakho-ke sisetshenziswa futhi njengesidakamizwa esiqinisa jikelele, esivumela umzimba ukuthi umelane kangcono nezifo.
i-hepatitis eyingozi futhi engalapheki, kufaka phakathi okubangelwa utshwala,
i-dystrophy yesibindi esinamafutha,
i-cell cell necrosis,
i-psoriasis (ekwelashweni okuyinkimbinkimbi),
I-toxicosis kwabesifazane abakhulelwe,
ukunqandwa kokuphinda futhi kwezibongo,
esikhathini sokululama ngemuva kokuhlinzwa kwi-gallbladder, isibindi ne-bile ducts.
Lezi zimo ezibhalwe ngenhla ziyizinkomba eziqondile zokuthola Okubalulekile. Kepha kunezinhlobo zezifo nemibandela evunyelwe ukusebenzisa lesi sidakamizwa, yize kungeyona yezinkomba ezigunyazwe ngokusemthethweni:
Izifo zenhliziyo nezemithambo, kufaka phakathi i-angina pectoris, isifo senhliziyo, isimo ngemuva kokushaywa unhlangothi noma ukuhlaselwa yisifo senhliziyo, umfutho wegazi ophakeme, ukuphuma kwegazi kanye nokugeleza kwegazi lokuqina, i-angiopathy yesifo sikashukela, isifo sokuqina kwemizwa,
i-pathologies yesistimu yokugaya - isilonda esiswini kanye ne-12 duodenal ulcer, pancreatitis, njll.
ukwelashwa nokuvinjwa kokuqunjelwa kwamafutha,
ukuvimbela i-thromboembolism ngaphambi kokuhlinzwa.
Ukuxhumana kokuthathwa kokuthatha i-Essential Forte: i-hypersensitivity kuzakhi zomuthi, iminyaka yobudala engafika kwengu-12.
iminyaka efinyelela eminyakeni eyi-12
Kwesinye isikhathi ukuphuza umuthi kungadala ukukhula kwemiphumela emibi elandelayo:
ukuqhuma, ukuvutha, umuzwa wobunzima esiswini,
ukungahambi kahle komzimba: ukulunywa, i-urticaria, i-exanthema, ukuqubuka.
Ukuqhathaniswa kwe-Resalyuta Pro ne-Essential Forte
Ukuthola ukuthi yisiphi isidakamizwa esisebenza kakhulu, kufanele usiqhathanise.
I-Resalut Pro ne-Essentiale zinezici ezimbalwa ezijwayelekile:
into efanayo esebenzayo
inqubo efanayo yokwenza,
ukwephulwa okufanayo nemiphumela emibi,
uhlelo lokwamukelwa okufanayo
ifomu elilinganayo lomthamo.
Ukubuyekezwa kodokotela mayelana ne-Resalyut Pro noma i-Essential Forte
UMargarita, 51, udokotela wamazinyo, uVladimir: “Ngicabanga ukuthi i-Essentiale ikhambi elisebenzayo, ngoba lithuthukisa isimo sesibindi ngesikhathi sokudakwa kanye nasezifo ezahlukahlukene. Imvamisa ngiyinikeza ubuthi obunobuthi, i-steatohepatitis, i-cirrhosis. Iziguli azivamile ukukhononda ngokuthuthukiswa kokuphendula okungahambi kahle. Ezimweni eziningi, umuthi ubekezelelwa kahle. "
UMikhail, oneminyaka engama-49 ubudala, udokotela wezokwelapha, uSytytykkar: “I-Resalyut Pro inomphumela oqinile wokwelapha. Kunconywa ukuyisebenzisa kaningi ngangokunokwenzeka, ngoba abantu bomuthi babamba iqhaza ezinqubweni ze-metabolic emzimbeni womuntu. "Kubonakala ngokukhula okungajwayelekile kwemiphumela emibi nokungabikho kwe-overdose, okuvumela ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa ngemithamo emikhulu."
UVeronika, oneminyaka engama-41, uVolgograd: “Ngine-cholecystitis engamahlalakhona, ngakho udokotela wayala umuthi i-Essentiale Forte. Ngemuva kwenkambo yokwelashwa, ngifuna ukusho okulandelayo: isebenza ngokushesha, ubuhlungu nokungaphatheki kahle kwi-hypochondrium kunyamalala ngokushesha nje emva kokuphatha. Akuzange kube nemiphumela emibi yomzimba. ”
USvetlana, oneminyaka engama-47, eSt. Petersburg: “Ngemuva kokuhlolwa, umyeni wami watholakala ukuthi wayenokukhuluphala kwesibindi. Akuzange kumkhathaze, kodwa amabala agqokile angena emzimbeni wakhe. Udokotela we-gastroenterologist unqume iRezalyut Pro. Kwakudingeka ukuyithatha amaphilisi ama-2 izikhathi ezimbili ngosuku izinyanga eziyizi-1.5. Umyeni welashwa ngezifundo njalo ezinyangeni ezi-3, kuyilapho kungekho miphumela emibi eyenziwayo. Ngemuva konyaka, ngokusho kwemiphumela ye-Ultra, kwaba nokuthuthuka, amabala adlula futhi angabe esabonakala. "
AmaHepatoprotectors izidakamizwa ezibekelwe ukwelapha izifo zesibindi. Le mishanguzo isetshenziswa njengengxenye yokwelashwa okuyinkimbinkimbi kwe-viral hepatitis, icteric syndrome yanoma ikuphi i-etiology, ukuwohloka kwamafutha kwesibindi, i-cirrhosis yotshwala, ubuthi kanye nomonakalo owelapha kwezicubu zesibindi.
Isakhiwo esivamile sesigaba sezidakamizwa ze-hepatotropic
Izidakamizwa ze-Hepatotropic zibuyisela umsebenzi wamaseli wesibindi, zifake isandla ekubanjweni okungcono kwe-bilirubin ngama-hepatocytes, ithuthukise ukuphuma kwe-bile secretion ngemigqa. Izidakamizwa zisiza ukuthuthukisa ama-transaminases, i-bilirubin, i-alkaline phosphatase.
Ezigulini ezinenkambo engapheli ye-hepatitis kanye ne-cirrhosis, izidakamizwa ezinjalo zandisa isikhathi sokuxolelwa, zisiza ukunciphisa usayizi (noma ukugcina okufanayo) kwe-foci ye-necrosis noma ukuwohloka kwezicubu ze-adipose (connective).
Ukusetshenziswa kwaleli qembu lezidakamizwa kwenze ukuthi kwandiswe impilo yeziguli ezine-hepatitis yemvelo ye-autoimmune. Ama-heepatoprotectors alezi zifo empeleni ayingxenye yokwelashwa okuphelele (kanye nama-immunosuppressants). Vumela ukubuyiselwa okuyingxenye kwamaseli wesibindi, okubaluleke kakhulu ezigulini ezidinga ukufakelwa kwesibindi.
Izidakamizwa ze-Hepatorthopathic zinamaqembu ambalwa:
phospholipids ebalulekile (Okubalulekile, Okuphakamisayo),
amalungiselelo we-herbal (Carsil, Gepabene),
okususelwa ku-amino acid (Heptral, Hepamerz),
imikhiqizo equkethe ursodeoxycholic acid (Ursosan, Ursofalk).
Ama-Hepatoprotectors wamaqembu ahlukene kwesinye isikhathi ahlanganiswa ndawonye. Lokhu kukuvumela ukuthi uthuthukise umphumela wokwelapha, ukusheshisa ukululama kwesiguli ngamafomu ashubile wesifo sesibindi (i-hepatitis enobuthi kanye nezidakamizwa). Inhlanganisela ejwayelekile kakhulu ibhekwa njengokuphatha ngokuhlanganyela kwama-phospholipids abalulekile nezidakamizwa ezine-ursodeoxycholic acid.
Le ndlela yokwelashwa isebenza kakhulu emtholampilo we-bile stasis. I-Ursodeoxycholic acid isiza ukuthuthukisa ukuphuma kwe-bile kusuka kumaseli e-bile, okunciphisa umthwalo esibindini, kuvimbela ukubhujiswa kwe-hepatocytes ngama-enzymes we-bile, futhi kunciphise ukungena kwe-bile acid, bilirubin egazini.
Isenzo se-ursodeoxycholic acid
Ama-phospholipids abalulekile (i-EFL) nawo ahlanganiswe kahle namanye amaqembu ezidakamizwa. Ama-Derivatives ama-amino acid angasetshenziswa njengesidakamizwa sesibili. Bandisa ukusebenza kahle kokwelashwa kokuqina kwe-bile (cholestasis) ye-intracellular. I-EFL ivimbela ukubhujiswa okuthe xaxa kwe-hepatocytes, kanye nokutholakala kwe-amino acid kungathuthukisa ukwakheka kwama-enzymes we-bile, futhi kusize nokuphuma kwayo ngemicu.
I-monotherapy ye-EFL ye-cholestasis ayinconywa namhlanje, ikakhulukazi kumithamo ephezulu. Iziguli zikhonjiswa ukuthi ziphuze umuthi ngokuya nge-EFL kungabi ngaphezu kwe-1.8 g enteral, kuze kufike ku-1 g ngabazali.
Imithamo ephezulu ye-EFL ingashuba isimo seziguli. Uma i-monotherapy ye-EFL emithanjeni eyamukelekayo inganiki umphumela omuhle, kuhlanganiswa izidakamizwa ze-hepatotropic zakwamanye amaqembu.
Yisiphi isidakamizwa okufanele usikhethe?
I-Resalut Pro ne-Essential Forte angama-hepatoprotectors avela eqenjini lama-phospholipids abalulekile. Umphumela wokwelapha wale mishanguzo iyefana. Njenge-monotherapy, izidakamizwa zikhonjiswa ngenxa ye-hepatitis engapheli, isifo sokuqina kwesibindi, i-icteric syndrome. Ngokubonakaliswa kwe-cholestasis, izidakamizwa zihlanganiswa kakhulu.
I-Essentiale ne-Resalut ifundwe kahle. Zingabekwa ekuhlolweni kwezingane, kwezokubelethisa (iRezalyut Pro kuphela ngokuya ngezinkomba) ukuze kulondolozwe ukusebenza kwesibindi. Kodwa-ke, kanye nendlela efanayo yokusebenza ekusebenzeni kwezidakamizwa, kunomehluko (Ithebula 1). Cabanga ngale mishanguzo ngemininingwane eminingi.
Ithebula 1 - Izici zokuqhathanisa ze-Essential Forte ne-Resalute Pro
Isakhi esisebenzayo Ama-phospholipids avela soya (choline). Ama-phospholipids ama-Polyunsaturated avela ku-soya lecithin (phosphotidylcholine, phosphoglycerides).
Isenzo se-Pharmacological Inikeza ukubuyiselwa kwamaseli wesibindi, kuqeda ukuntuleka kwama-phospholipids, esiza ekunciphiseni ukushintshwa kwama-hepatocytes izicubu ze-adipose, athuthukise umsebenzi wokuqina kwesibindi, futhi evimbela i-lipid oxidation. Kusheshisa amandla okuvuselela kabusha ama-hepatocytes, kuzinzisa ulwelwesi lwamaseli, kunciphisa i-lipid oxidation, kunciphisa izinga lokukhiqizwa kwe-collagen fiber izicubu zesibindi, futhi kwehlise i-cholesterol.
Ifomu Amaphilisi (300 mg). Amaphilisi (300 mg).
Izinkomba Okufanayo ne-Resalut Pro, kanye:
I-toxicosis ngesikhathi sokukhulelwa,
ukulimala kwemisebe kwezicubu zesibindi,
i-hepatitis engapheli, ukulimala kwesibindi kwemvelaphi enobuthi,
ukungabekezeleli izingxenye zomuthi,
izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12
Umuthi i-Rezalyut Pro awunasizinda esanele somtholampilo ongasisetshenziswa kubantu besifazane abakhulelwe, abaphephayo, kanye nezingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala. Okubalulekile kungabekwa kwabesifazane abakhulelwe abanezibonakaliso ezinzima ze-toxicosis, kanye nezifo zesibindi.
Imiphumela engafuneki ye-Resalut Pro ifaka:
ukubonakaliswa kwe-dyspeptic (isifo sohudo, isicanucanu, ukuhlanza),
ukungezwani ngesimo sokuqunjelwa, i-urticaria,
petechiae (izikhonkwane hemorrhages),
ukopha kwesibeletho phakathi komjikelezo kwabesifazane.
I-Essential Forte iyakwazi ukudala izimpawu ezifanayo ngamandla amancane. Imiphumela engathandeki ku-Essential Forte iyivelakancane. Ngokuvamile, umuthi ubekezelelwa kahle yiziguli.
Imithetho nesikhathi sokuvuma
I-Resaly kufanele ithathwe ngamaphilisi ama-2 kathathu ngosuku ngaphambi kokudla. Kuyelulekwa ukuphuza umuthi ngengilazi yamanzi. Lokhu kuyadingeka ekuchithweni okuvamile kwe-capsule esiswini, ukudlula okwanele kuyo ngokusebenzisa i-esophagus. Okubalulekile i-Forte futhi kuphuza amakhabethe ama-2 izikhathi ezi-3 ngosuku. Isikhathi sokwelashwa yisilinganiso sezinyanga ezintathu.
Ukusebenza kwezokwelapha kuhlolwa ngokuhlolwa ngokomzimba. Udokotela ulala isibindi, ubheka ukuthi isibindi sehlile noma sikhuphuke kangakanani. Udokotela unesifiso nokuma okujwayelekile kwesiguli, izinkomba zokuhlolwa kwelebhu.
Ukwelashwa kuthathwa njengokwenele uma izinkomba ze-bilirubin, i-alkaline phosphatase, i-hepatic transaminases (ALT, AST) zincipha noma zijwayelekile.
Ngokuncipha okungahambi kahle kwamapharamitha welebhu, udokotela angaqhubeka nokwelashwa nge-Essentiale Forte amaviki angafika kwangama-24 (kwezinye izikhathi aze afike kumaviki angama-48) noma engeze umuthi we-hepatotropic kwelinye iqembu. Imiphumela ekhulayo yokuqina kwe-bile idinga ukuhlanganiswa kwe-EFL ne-amino acid derivatives noma i-ursodeoxycholic acid.
Lezi zinhlanganisela zikhonjiswa nge-subhepatic jaundice, evame ukubangelwa i-cholecystitis, i-cirrhosis, ukwakheka kwesisu okucindezela ama-bile ducts, i-cholelithiasis, ascites ne-cirrhosis, i-pancreatitis (yokwandiswa kwekhanda le-pancreas).
I-Essential Forte inemiphumela emibi emincane, ngakho-ke ingasetshenziswa i-toxicosis kwabesifazane abakhulelwe. Yabela ngemithamo ejwayelekile yokwelapha noma ngawodwana.
Isikhathi sedosi yesifundo incike esimweni esivamile sesiguli, kanye nosayizi we-foci wokulimala kwesibindi, ijubane lokusabalala kwawo. Ungawuthatha umuthi kuze kuphele ukunyamalala kwezimpawu zomtholampilo, okujwayelekile okwenziwa ngamapharamitha we-biochemical.
Inzuzo enkulu ye-Essential Forte ukuthi ukwelashwa kungenziwa isikhathi eside. Kuyamukeleka ukwelashwa iminyaka engu-2-4.
Kulokhu, umuthi ungakhipha ukungakhululeki okuncane esiswini noma uhudo olufushane. Ngezinye izikhathi komzimba ungakhula. Iziguli ezine-hepatitis B engapheli yegciwane B, C, i-cirrhosis kufanele zinikezwe izifundo ezinde zokwelashwa ukuze zilondoloze ukuxolelwa.
Ngalezi zizathu, alikwazi ukusetshenziswa kwabesifazane abakhulelwe. Ngesikhathi sokukhulelwa, amathuba okuba komzimba ngenkathi uphuza umuthi kukhuphuka kaningana, ikakhulukazi uma isiguli sinesifo se-allergen.
Ukusetshenziswa okuhlangene nokwelashwa kwezifo ezithile
I-Resalut ne-Essentiale azinqunyelwe kanyekanye, ngoba zingamalungu eqembu elilodwa le-hepatoprotectors. Ngokuphikisana nesizinda sokuphathwa kanyekanye kwalezi zidakamizwa, i-overdose kungenzeka, ukuthuthukiswa kwemiphumela engathandeki (isifo sohudo, komzimba omkhulu). Imithi ingathathelwa indawo yodwa (enye). Umthamo wento esebenzayo akufanele wedlule i-1.8 g.
I-Essential Forte ichazwe ngenkuthalo ezigulini ezine-psoriasis njengengxenye yokwelashwa okujwayelekile. Ngesikhathi sokwelashwa, isimo ejwayelekile siyathuthuka ezigulini, futhi nezinga lama-cytokines okuvuvukala liyancipha. Lapho usebenzisa umuthi, kuba nokuncipha okuncane kwe-cholesterol. Iziguli ezine-psoriasis zikhonjiswa ukuthatha amaphilisi ama-Essentiale Forte 2 kathathu ngosuku.
Sungula Ubuchwepheshe Bokukhiqiza
Kunobufakazi besayensi bokusebenzisa kwePhosphogliv ku-psoriasis. Lesi sidakamizwa sisebenza kakhulu kune-Essentiale. I-Rezalut Pro iyi-analogue yayo, ngakho-ke nayo ingabhekelwa kwiziguli ezinale ndlela yokugula. Uma usebenzisa i-Resalut, ama-cytokines azokwehla ngokushesha okukhulu, futhi namazinga we-cholesterol yegazi nawo azoncipha kahle. Thatha lo muthi izinsuku ezingama-21-30, amaphilisi ama-1 noma amabili kathathu ngosuku.
I-Resaly isiza iziguli ezine-atherossteosis ukwehlisa i-cholesterol, isiza ukwehlisa izinga lokuwohloka kwamaseli wesibindi abe izicubu ze-adipose. Uma iziguli sezivele zinamafutha i-steatosis, khona-ke umuthi onomuthi omfushane uzothuthukisa ama-transaminases ne-bilirubin. Lapho usebenzisa umuthi ezigulini ngesikhathi sokuhlolwa ngokomzimba, ubukhulu besibindi buyancipha, ubukhulu be-hypochondrium efanele buyanyamalala.
Okubalulekile kusetshenziselwa ukwelapha ukulimala kwesibindi esinamafutha. Umuthi kumele unqunywe ngokushesha ngemuva kokutholwa kwalesi sifo. Lokhu kuzosiza ukunciphisa ingozi yokuqhubeka kokusakazeka kwe-foci ye-hepatosis enamafutha, futhi kubuye nokusebenza kwesibindi isikhathi eside. Ukusetshenziswa kwemithi kumele kuhlanganiswe nama-statins, ukwelashwa kokudla, umsebenzi womzimba. Uma isiguli singakulandeli ekudleni, ukusebenza kahle kokwelashwa kuyancishiswa.
Ochwepheshe baqinisekisa ukusebenza okuphezulu kokuthatha i-hepatoprotectors. Le mishanguzo isiza ukubuyisa ukusebenza kwesibindi ezigulini ezinezimo ezahlukahlukene ezihambisana nokulimala kwesibindi.
I-Resalyut inobuhlakani bokunciphisa i-cholesterol engcono, ngakho-ke ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa kungcono kwe-psoriasis, ukulimala kwesibindi esinamafutha, kanye ne-atherossteosis. Isikhathi sokwelashwa kwe-Resalyut sinqunywa udokotela ohambayo ngokuya ngesimo sesiguli, ukwanda kwendawo ethintekile yesibindi, izinga lama-enzyme esibindi, i-bilirubin ne-cholesterol.
Umphumela we-Resalute kulwelwesi lwe-hepatocyte
I-Essential Forte isebenza kakhulu ezigulini ezine-hepatitis yegciwane, i-cirrhosis yesibindi yemisuka ehlukahlukene. Umuthi ubekezelelwa kahle, okuvumela ukuthi uthathe isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezintathu. Iziguli zinokwehla kwe-bilirubin, ALT, AST.
Ngenkathi uthatha i-EFL, iziguli zizizwa zingcono, ubuthakathaka, usizi ku-hypochondrium efanelekile, kanye ne-icteric syndrome ziyahamba.
Odokotela baphinde bancome ukuhlanganisa iqembu le-EFL nezidakamizwa ze-choleretic ukukhulisa umphumela wezokwelapha, ikakhulukazi uma iziguli zinokuqunjelwa kwe-bile.
Ukubuyekezwa kweziguli mayelana nokubalulekile nomphumela muhle kakhulu. Iziguli ngemuva kokwelashwa ziphawula ukwanda kwamandla, ukwehla kokungakhululeki ku-hypochondrium efanelekile, kanye nokuthuthuka kokudla. Emiphumeleni engathandeki, iziguli ezisebenzisa izidakamizwa zinaka ukungahambi kahle kwesisu, ukuqubuka komzimba.
Ngaphandle kwemithi kadokotela, awukwazi ukuthatha imishanguzo, ngoba izinkinga kungenzeka. Imithamo ephezulu ye-EFL yezimpawu ze-cholestasis ingalimaza ukusebenza kwesibindi. Ukusetshenziswa isikhathi eside kwe-Resalyut kuvusa ukonakala okunamafutha kwezicubu zesibindi, komzimba kanye nokwanda kwezinga lamavithamini we-B.
Okubalulekile i-Forte ne-Resalute Pro ngama-hepatoprotectors avela eqenjini le-EFL. Zombili lezi zidakamizwa zisebenza kahle ekwelapheni izifo zesibindi. I-Essential Forte ilungele ukusetshenziswa kwesikhathi eside, i-Resalut inqunywe kwizifundo ezimfushane ngekhefu lenyanga noma ngaphezulu.
Inkambu yokusebenzisa izidakamizwa icishe ifane, ngakho-ke ingashintshwa. Ukuqokwa kwama-hepatoprotectors nokusetshenziswa kwawo okufanele kuzosiza ukubuyisela ukusebenza kwesibindi, kwandise ukuthethelelwa kwe-hepatic pathologies engapheli.
Isenzo nezinkomba zokwamukelwa
Umuthi weRezalyut ungoweqembu lama-hepatoprotectors, athinta ngokuqondile ukulungiswa kwezikhumba, asheshise futhi aqinise le nqubo. Izakhi zomuthi zingavimbela inqubo ye-oxidative ye-lipids, zivimbela ukwakheka kwe-collagen esibindini. Umuthi wehlisela i-cholesterol futhi usiza ekujwayezeni i-lipid metabolism.
Odokotela babeka lo muthi hhayi ukubuyisela ukusebenza okujwayelekile kwamaseli wesibindi, kodwa futhi nokuqeda izimpawu zokudakwa nokunoshevu womzimba. Faka isicelo se-Resalut njengendlela yokwelapha eyinkimbinkimbi ye-atherossteosis ukunciphisa izinga lotshwala be-lipophilic, kanye nokugula okunjengalawa:
ukonakala okunamafutha kwamaseli wesibindi,
ukudakwa ngenxa yokulimala kwegciwane, kwezezokwelapha noma kwamakhemikhali.
Enye imbangela yokwehluleka kwamaseli wesibindi kungukudla okungenampilo.
Umuthi "Resalut" wenzelwe ukuphathwa ngomlomo. Ngokusho kwemiyalo, kunconyelwa ukuphuza amaphilisi ngokushesha ngaphambi kokudla ukudla, ngaphandle kokuwahlafuna bese uphuza amanzi amaningi. Kubalulekile ukuthi ungalimazi i-capsule, ngoba ingahle ilahlekelwe yikho konke ukutholakala kwemithi endleleni eya emathunjini. Kuyadingeka ukuthatha umuthi amabhodwe ayisithupha ngosuku, wephule lo mbuyiselo ube izingcezu ezintathu. Kodwa-ke, lo mgamo usezingeni, unembe ngokwengeziwe ukunqunywa udokotela ngokuya ngesifo kanye nesimo sesiguli.
Inkambo yokwelapha ibekiwe ngokulandelana esigulini ngasinye. Ngokuhamba kwezinsuku eziyi-14, umphumela obonakalayo omuhle wokwelashwa kufanele ubhekwe, uma lokhu kungenzekanga, kubalulekile ukuyeka eminye imishanguzo futhi ubheke i-analogue enamandla.
Odokotela abayikhiphi i-Rezalyut uma isiguli sine-hypersensitivity kanye nokungabekezelelani ezingxenyeni zalesi sikhungo semithi, esifo semultimystem esibonakala ngokukhiqizwa kwenqwaba yama-antibodies kuma-phospholipids. Umuthi lo uhlathululwa ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala, ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa ibele. Imiphumela emibi elandelayo ingenzeka ngesikhathi sokwelashwa nge-Rezalut drug:
ukungezwani komzimba ngendlela yamaphashazi ne-urticaria,
ukungakhululeki nobuhlungu esiswini,
amabala aphakama esikhunjeni,
ukopha kwabesifazane phakathi kwemijikelezo yokuya esikhathini.
Ukusebenzelana kwezidakamizwa notshwala
Lapho welapha umuthi weRezalut, kuyadingeka ukuthi unake ubuhlobo bayo neminye imithi. Lapho usebenzisa lokhu kulungiswa kwemithi kuhlanganiswa nama-anticoagulants, kunobungozi bemiphumela eyandayo yalokhu kwamuva. Uma kungenakulindeka ukuthi eyodwa yazo ikhishwe ngaphandle, kuyadingeka ukwenza ukuxilongwa kwegazi, okuzokuvumela ukuthi uguqule umthamo wemithi.
Ehlelweni lokwelapha izifo zesibindi ngemithi yeRezalyut, kuyadingeka ukuyeka ukusetshenziswa kotshwala. Utshwala bune-ethanol ekwakhiweni kwabo, obuthinta kabi amaseli wesibindi. Ukwelashwa kuzobe kungasasebenzi, ngakho-ke utshwala abuhambelani nokuphuza lo muthi owelapha.
Izici zohlelo lokusebenza
Umuthi "Resalut" unezici ezithile zokusetshenziswa. Ngaphambi kokuqala ukwelashwa ngalo muthi, kubalulekile ukungafaki izici ezithinta kabi amaseli wesibindi, uziqede. Izici ezinjalo zifaka phakathi: iziphuzo eziqukethe utshwala, izidakamizwa, amakhowe, ukusetshenziswa kwezidakamizwa, ukucekela phansi i-hepatocytes, ukudla okungafanele. Ku-hepatitis engamahlalakhona, umuthi unqunywa kuphela ngemuva kokuthatha amakhambi okwelashwa okwathatha amasonto amabili. Umphumela we-Resalut ekhonweni lokushayela imoto nezinye izindlela ayaziwa.
Yimuphi umuthi ongcono esibindini: Okubalulekile noma Okuphindaphindayo?
Emaketangeni ekhemisi, ungathola i-analogue yesidakamizwa "Resalut", enokufana ekubumbeni. Sikhuluma ngomuthi obalulekile. Lokhu kulungiswa kwemithi emibili kuhlanganiswe futhi kusiza kakhulu ukuvimbela izifo ezingelapheki kwesibindi. "Okubalulekile" kuyatholakala ngesimo samaphilisi anokuqina okungaguquki kwe-gelatinous, nsundu. Ngaphakathi kwamaphilisi kunesigaxa esinamafutha esinamafutha, esiqukethe lezi zinto ezilandelayo: amanzi ahlanziwe, udayi we-E172, i-gelatin, i-sodium lauryl sulfate. Lo muthi unqunyelwe i-hepatitis engamahlalakhona, i-hepatocytic cirrhosis, ukulimala okunobuthi kumaseli wesibindi, i-toxicosis ngesikhathi sokukhulelwa, i-cirrhosis yotshwala, i-radiation syndrome nanjenge-prophylactic yokuphinde ibuyele isifo se-gallstone.
Ukuhlangana kokuthatha umuthi i- "Essentiale" kungukuphela kweminyaka eyi-12 kanye ne-hypersensitivity ku-phosphatidylcholine nezinye izinto zayo ezizosiza. Kuyadingeka ukuthatha ukulungiswa kwemithi amaphilisi amabili kathathu ngosuku. Kubalulekile ukuthi ungawahlafunisi amaphaphu, kodwa uwagwinye wonke ngenani elikhulu lamanzi. Kufanele badakwe ngesikhathi sokudla unyaka wonke, bathatha amakhefu amasonto amabili.
Ngosizo lweBalulekile, ukusebenza okujwayelekile kwamaseli wesibindi nezinye izitho ezibalulekile kuyabuyiselwa. Umuthi unomphumela omuhle kumetabolism emzimbeni wonke. Awukho umehluko obalulekile phakathi kwezidakamizwa zeRezalyut neze-Essential, ngoba ama-phospholipids okugcina anomphumela wokuphulukisa okukhethekile. Kodwa-ke, i-Resalyut isebenza ngokuthe xaxa, ihlinzeka ngomsebenzi wokuvikela ophezulu wamaseli omzimba omkhulu wokugaya ukudla. Okubalulekile, nakho, kuqinisa ngempumelelo i-hepatocytes, futhi iRezalyut ithuthukisa ukusebenza kwayo. Ngokusekelwe kulokhu, ukukhethwa kwesidakamizwa kuncike kuphela kwisidingo somphumela othile wokwelapha kumaseli wesibindi athintekile.
I-Essentiale ayisebenzi kahle futhi ishibhile kune-Resalut.
Lapho uphendula umbuzo wokuthi yisiphi isidakamizwa esingcono, kuyadingeka ukuthi ucabangele ubuhle nobubi bawo obalulekile. Izinzuzo zeRezalyut zibandakanya ukusebenza kwayo okuphezulu kakhulu kanye nokuvela okungajwayelekile kwemiphumela emibi. Okubi kwalo muthi kungokulandelayo:
Ukuqedwa ngokushesha kwezakhi zomuthi,
ukugcwala okuphezulu komkhiqizo wemithi egazini, ophikelela isikhathi eside.
Izinzuzo ze- "Okubalulekile" zifaka ukusebenza kahle okuphezulu, kanye nomlingani wayo, isikhathi sokuvezwa, okungamahora angama-24. The plus ukwehla okusheshayo kwezidakamizwa ezisegazini. Okubi kwe-Okubalulekile ayisihle kakhulu intengo ephansi kanye nokuvela kaningi kwemiphumela emibi.